पाँचतारे होटलमा माओवादी मजदुर संगठन... :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
पाँचतारे होटलमा माओवादी मजदुर संगठन किन बलियो?
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, भदौ २३
केही समयअघि दुई चरण गरी ६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र सहरहरुमा नराम्रोसँग पराजित भयो। काठमाडौं महानरमा त सो पार्टीको जमानत नै जफत भयो।
ग्रामिण क्षेत्रमा पाएको भोटले मात्र तेस्रो पार्टीका रुपमा माओवादी पार्टीको साख जोगियो। तर, पछिल्ला केही महिनामा काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा सम्पन्न ट्रेड युनियनको चुनावमा भने माओवादी केन्द्र निकट ट्रेड युनियनले अधिकांश ठाँउमा जितेर अरु पार्टीकालाई धेरै पछि पारेको छ।
काठमाडौंका प्रतिष्ठित तारे होटलहरु सोल्टी, हायात, याक एण्ड यति, र्‍याडिसन तथा हिमालयमा माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो, रेष्टुरेन्ट संघले जित हात पारेको छ।
काठमाडौंका दुई पाँचतारे होटलमा मात्र अरु पार्टी आबद्ध ट्रेड युनियनले जितेका छन्। होटल सांग्रिलामा नयाँ शक्तिनिकट मजदुर संगठनले जितेको छ भने होटल अन्नपुर्णमा मत बराबर हुँदा गोलाप्रथाबाट एमाले जिफन्टले जितेको छ।
उक्त संगठनका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले केही होटलमा आफूहरुमात्र भएकाले निर्वाचन नै गराउनु नपरेको बताए।
साथै पोखराको फिसटेलमा पनि आफ्नो संगठनले जित हात पारेको पन्तले जानकारी दिए।
पछिल्ला वर्षमा माओवादी पार्टी मात्र फुटेको हैन, योसँग आबद्ध ट्रेड युनियन पनि फुटेर चिरा-चिरा भएका छन्। तर, पनि माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध ट्रेड युनियन कसरी यति धेरै तारे होटलमा जित्न सफल भयो?
२०६२/६३ को परिवर्तनपछिमात्र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा छिरेको माओवादी संगठन फुट्दा पनि किन होटलहरूमा जित्न सफल भयो?
माओवादी मजदुर नेता पन्त भन्छन्, 'मजदुरका हकहित पक्षमा बोल्ने काम मात्र हामी गर्दैनौं। अधिकार पाउन समन्वय गर्ने र व्यवस्थापकसँग सुमधुर तरिकाले छलफल गर्ने र आवश्यक परे कानुनी बाटो समात्छौं। त्यसैको परिणाम आउँछ।'
अन्य संगठनको भने माओवादीले अधिक क्रान्तिकारी नारा लगाउने र कामभन्दा चर्का कुरा गर्ने भएकाले प्राविधिकरुपलेमात्र जित्न सफल भएको आरोप छ।
'मजदुहरुबीच हामीले सम्भव र सक्ने कुरा मात्र बोलेका छौं। अरूले भने लोकप्रियताकै लागि चर्का कुरा गरेका छन्। यस्तोमा माओवादी संगठन अगाडि देखिएको छ,' एमालेको भातृ संगठन नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर संघका अध्यक्ष सूर्य कुँवरले भने।
त्यस्तै पछिल्लो समय होटल तथा रेष्टुरेन्टमा आफूहरुको संगठनविरुद्ध गठबन्धन गरेर माओवादीले जित हत पार्न सफल भएको उनले बताए।
'स्वभाविक रुपमा आजभन्दा ५/६ वर्ष पहिले माओवादीको संगठन केही बलियो थियो,' उनले भने,'तर अहिले उनीहरु हामीभन्दा बलिया छैनन्, गठबन्धन बनाएर जितेका हुन्।’
सबैतिर अन्य संगठनका मजदुरहरुले भोट दिएका कारण माओवादी संगठन हावी भएको कुँवरको भनाइ छ। माओवादीलाई नयाँ शक्ति, काँग्रेस लगायतका संगठनको सहयोग रहेको उनले बताए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि आधिकारीकरुपमा एमाले र काँग्रेस समर्थित मजदुर संगठनमात्र थिए। यद्यपी सबै होटल तथा प्रतिष्ठानमा सांगठनिक गतिविधि थिएन। त्यतिबेला माओवादी संगठनको औपचारिक स्वरूप थिएन।
चर्का नाराकै भरमा होटल क्षेत्रको आधिकारीक युनियनमा जित हात पारेको आरोप माओवादी संगठनका नेताहरु भने स्वीकार्दैनन्।
'चर्का नारामात्र लगाएर जितिने भए हामीबाट फुटेर गएका साथीहरु (बिप्लप समूह) ले जित्नुपर्ने हो। नारा होइन। ०६३ मा हामी आएदेखि श्रमिकका हकहितका लागि निरन्तर लडेका हाम्रो लोकप्रियता स्थापित भएको हो,' पन्तले सेतोपाटीसँग भने।
माओवादी केन्द्र निकट मजदुर युनियनले जित्नुको कारण के हो त?
माओवादीका लागि 'टर्निङ प्वाइन्ट’ भनेकै होटल तथा रेष्टुरेन्टमा १० प्रतिशत अनिवार्य सेवा शुल्कको मुद्दा हो।
मजदुरहरुले बिलमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज पाउनुपर्ने माग २०३६ सालदेखि उठिरहेको थियो। तर, यो मुद्दा सधैं उठ्थ्यो र सुस्ताउँथ्यो। जब माओवादी संगठन होटल पस्यो, तब उसले यो मुद्दा समातेन मात्र, लागू नै गरायो।
'हामी आउनुअघि त्यो मुद्दा केवल केही ठालुहरुको बार्गेनिङको विषयमात्र बन्थ्यो,' माओवादी होटल मजदुर संगठनका महासचिव तथा हायात रिजेन्सी आधिकारीक युनियनका अध्यक्ष समेत रहेका मुक्ति दाहालले भने, 'जब हामी आयौं, त्यो कायम गराएरै छाड्यौं।'
होटल तथा रेष्टुरेन्टमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज लागू भएपछि मजदुरहरूले अतिरिक्त आम्दानी गर्न थालेका छन्। कुनै पनि बिलमा अतिरिक्त १० प्रतिशत जोडेर उक्त रकम छुट्टै खातामा जान्छ र मजदुरलाई समानुपातिक ढंगले बाँडिन्छ। यो सुविधा लागू भएपछि पाँचतारे होटलका मजदुरले महिनामा १५ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्न थालेका छन्।
सोल्टी होटल आधिकारीक युनियनका अध्यक्ष शुशील राजभण्डारीका अनुसार त्यसरी चार्ज लिने ५ सय ६३ जना कर्मचारी छन् जसले गएको असार महिनामा प्रतिमजदुरले १३ हजार रुपैयाँ पाए।
'यो उपलब्धि हाम्रो ट्रेड युनियनका कारण भएकाले पनि मजदुरहरुले हामीलाई रुचाएका हुन्,’ उनले भने।
तलब, सुविधा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका सवालमा पनि आफ्नो युनियनले अधिकारहरु स्थापित गराउँदै लगेकोले मजदुरहरुको समर्थन पाएको माओवादी मजदुर नेता पन्तले तर्क गरे।
'हामी आउँदा मजदुरप्रति व्यवस्थापकको अत्याचार थियो, थोरै तलबमा बिना कुनै सामाजिक सुरक्षा काम गरिरहेका थिए,' उनले भने,'तर हामी आउने बित्तिकै व्यवस्थापक समक्ष सुविधा र अधिकारको माग राख्यौं र ति विस्तारै पूरा हुँदै गए।'
माओवादी युनियन होटल पस्दा २२ सय मासिक तलब बुझ्ने मजदुर आज ३० हजार रुपैयाँ बुझ्ने भइसक्यो। यसमा आम्दानी, उत्पादकत्व वृद्धिसँगै तलब सुविधा बढ्ने स्वभाविक प्रक्रियाको फाइदा पनि माओवादी संगठनले लिन सफल भयो। बीमा, उपचार, उपदानजस्ता उपलब्धि होटल क्षेत्रका मजदुरले पाएमध्येकै ठूला हुन्।
'सुरुमा हामीले उठाउँदा यी माग चर्का लाग्थे, अहिले सबै पूरा भएका छन्। व्यवस्थापन पनि सन्तुष्ट छ,' उनले भने।
माओवादी मजदुर संगठनले गरेको अर्को काम ज्यालादारीका मजदुरलाई स्थायी गर्ने हो। सोल्टी होटलमामात्र हालसम्म १६३ जना त्यस्ता कर्मचारीलाई स्थायी गरिएको अध्यक्ष राजभण्डारी बताउँछन्।
हालै पारित भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐनमा भएका केही व्यवस्थाहरु आफूहरुकै दबाब र पहलको उपज भएको माओवादी मजदुर नेता पन्तले दावी गरे।
हायातमा आधिकारीक युनियनको नेतृत्व गरिरहेका दाहालको पनि भनाइ यही छ। 'करकाप, प्रलोभन जस्ता कुराले एकपटक जितिन्छ। पटकपटक वा सधैं हामी नै रोजाइमा परेका छौं। यसले अरूको त्यो तर्क गलत छ भन्ने प्रमाणित गर्छ,' उनले भने।
अन्य संगठनले मजदुरका सेवा सुविधा माग गर्ने तर अन्त्यमा गएर साहुहरुसँग सम्झौता गरी नेतृत्वलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने पुरानो प्रवृत्ति तोडेकाले मजदुरले आफ्नो संगठनमा भरोषा गरेको तर्क गर्छन् दाहाल।
माओवादी पार्टी निकट ट्रेड युनियन सहरमा सफल तर माउ पार्टी भने किन असफल?
मजदुरलाई मतदान अधिकारबाट बन्चित गरिएकोले माओवादीले यसबाट फाइदा लिन नसकेको दाहालको भनाइ छ।
'उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले भोट हाल्न बिदा पाउँदैन र सबैले पाउन सम्भव पनि छैन, उनीहरु भोटबाट वञ्चित हुन्छन्,' उनले भने, 'राज्यले मजदुरलाई काम गर्ने ठाउँबाटै भोट हाल्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौं।'
मजदुरबीच लोकप्रिय भएकै कारण गएको चुनावमा गाउँघरमा माओवादी जित्न सफल भएको पनि मजदुर नेता पन्तले दावी गरे।
'सहर बजारमा कामगर्ने अधिकांश मजदुर गाउँघरकै मतदाता रहेकोले पनि त्यस्ता ठाउँमा माओवादीको आधार बलियो भएको हो,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४, ०३:५०:०२